MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: Cover of Myanmar Thit Magazine - No. (4), Jan, 009
Cover of Myanmar Thit Magazine - No. (4), Jan, 009
ဗမာစစ်အဆိုးရ စာပေ ဆင်ဆာမှာ အခါခါ အစစ်ခံ၊ အရစ်ခံရပြီး အကြာကြီးတစ်နေရတဲ့ မြန်မာသစ် ထွက်ရှိပါပြီ
ထွက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာသစ် ရသစုံမဂ္ဂဇင်းအမှတ်(၄)၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၉ (၁၃၇၀ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလ)ရဲ့ မျက်နှာဖုံးပေါ်မှာတော့ ကုလသမဂ္ဂတံဆိပ်ကြီးနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့ အဆိုအမိန့်တစ်ခုကို ပူးတွဲဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘာမှမတူညီစရာ၊ ကွဲလွဲစရာ မရှိနိုင်ပါဘူး။´´
ဦးသန့် (၁၉၀၉ - ၂၀၀၉)
ဦးသန့် အဆိုအမိန့် မျက်နှာဖုံးတွင် ပါရှိသည့် မြန်မာသစ် မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေခွင့် မကျသေး (မဇ္ဈိမ)
Posted by Nyo Gyi at 28.1.09
Return of Lay Phyu - First Alpine-IC Music Show at...
Cover of Myanmar Thit Magazine - No. (4), Jan, 009...
100th Anniversary U Thant (2)
PRAYERS (Poem from Patauk Pwint Thit Magazine)